SAP Business One 9.3 မှာ ဘာတွေက ပိုပြီး ကောင်းမွန်လာမလဲ ? - Vanguard
Ver 9.3 956x620 copy
Home » SAP Business One 9.3 မှာ ဘာတွေက ပိုပြီး ကောင်းမွန်လာမလဲ ?
SAP Business One 9.3 မှာ ဘာတွေက ပိုပြီး ကောင်းမွန်လာမလဲ ?
Posted by Vanguard on July 25, 2017 .
2017 နှစ်ကုန်ပိုင်း လောက်မှာ ထွက်ရှိလာမယ့် SAP Business One version 9.3 မှာ သုံးစွဲ သူတွေရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကို အမြဲ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိတဲ့ SAP ရဲ့ ပိုပြီး လက်တွေ့ကျတဲ့ အရေးပါမှုတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
9.3 Update ရဲ့ စီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲခြင်း (Project Management) နဲ့ ထုတ်လုပ်မှု (Production) အပိုင်းတွေအပြင် အခြားသော အဓိကကျတဲ့ အပိုင်းတွေမှာလဲ ကောင်းမွန်တဲ့ ထပ်တိုးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေ ပါ၀င်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
SAP Business One Version 9.3 မှာ ဘယ်လို တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေပါလာမလဲ ?
9.3 version မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ တည်ငြိမ်မှုကို မြင်တွေ့ရမှာပါ ။ အဓိက လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အပေါ် ထပ်တိုး ချဲ့ထွင်မှုတွေ၊ တိုးမြှင့်မှုတွေအနေနဲ့ –
Addition of simple production routing
Addition of return merchandise authorization management (RMA)
စသည်ဖြင့်ပါ၀င်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဥပမာ အနေဖြင့် အချို့ပြောင်းလဲမှုတွေကတော့ –
Production Routing (ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်)
SAP Business One ရဲ့ ထုတ်လုပ်မှု အပိုင်းအနေနဲ့ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် (Production Routing) ပါ၀င်လာမှ ဖြစ်ပါတယ် ။ အသေးစား ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့် Production Routing ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ version တွေ အနေနဲ့ဆိုရင် Add-on အဖြစ်သာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားချက် အနေနဲ့ကတော့ employee တွေကို Cost-Centre အလိုက် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မှာပါ ။
Return Merchandise Authorization Management (ကုန်ပစ္စည်း ပြန်လည်အပ်နံမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း)
အရင် Version တွေမှာ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့ RMA (Return Merchandise Authorization) ဟာ အခု update version 9.3 မှာ ပါ၀င်လာခဲ့ပါပြီ ။ RMA ကတော့ ၀ယ်ယူပြီး ကုန်ပစ္စည်းကို ပြန်လဲချင်တဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် စာရွက် စာတမ်း တစ်ခု ဖြစ်ပြီး Invoice, Delivery အပြင် Service Call တွေကနေပါ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Project Management (စီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲခြင်း)
Project Management နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Update အချို့ ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Project Stage အလိုက် (Project ကိုမဟုတ်ပဲ) Transactions တွေကို ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုပြီးတိကျတဲ့ စီမံကိန်း ကုန်ကျ စရိတ်ကို လွယ်ကူ စွာသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။ Project Gantt Chart ပါ၀င်လာတဲ့အတွက် စီမံကိန်းကို ပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှာလဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Improved Authorization Management (ခွင့်ပြုချက် စီမံခန့်ခွဲမှု)
SAP Business One ရဲ့ version 9.3 မှာ Company နဲ့ User Setting တွေကို ပိုမိုရိုးရှင်းပြီး လက်တွေ့ကျတဲ့ ပုံစံနဲ့ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Functionality တွေကိုအသုံးပြုသူအလိုက် Default ပေါင်းထည့်သတ်မှတ်ပေး နိုင်မှာ ဖြစ်သလို ကိုယ့်ရဲ့ authorization setting ကိုလဲ ကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်နိုင်မယ့် ရွေးချယ်စရာ တစ်ခုလဲပါလာမှာပါ ။
Price List Enhancements (စျေးနှုန်း သတ်မှတ်ချက်)
လက်ရှိ version 9.2 အနေနဲ့ စျေးနှုန်း သတ်မှတ်ချက်ဟာ စနစ်ထဲမှာရှိတဲ့ Stock Unit နဲ့ ပြန်ဆက်စပ်ထားတာ မျိုးဖြစ်ပြီး version 9.3 မှာ ပါ၀င်လာမယ့် Price Unit function နဲ့ ဆိုရင်တော့ စျေးနှုန်းသတ်မှတ်တဲ့အခါ အရင် လို Stock Unit ကို ပြန် သွားပြီး ပြောင်းလဲစရာမလိုပဲ တစ်ကီလို (သို့မဟုတ်) တစ်ပုံး စသည်ဖြင့် Unit အလိုက် အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲသတ်မှတ် နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် ။
Customer Level အလိုက် စျေးနှုန်း ထပ်ဆင့် သတ်မှတ်ချက်တွေကိုလဲ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး အဆိုပါ သတ်မှတ်ချက်မှ တစ်ဆင့် Customer ကို ဘယ်လိုစျေးနှုန်းမျိုးနဲ့ ရောင်းချနေလဲဆိုတာကို သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SAP ရဲ့ စျေးနှုန်း သတ်မှတ် ချက်အထဲမှာ ရှိနေရင်တောင် Customer ကို lowest/highest price သတ်မှတ်ပေးပြီး စျေးနှုန်းကို ထပ်လောင်းပြောင်းလဲ နိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေလဲ ပါ၀င်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ဥပမာ – အနေနဲ့ သာမန်ပေးနေကျ အထူးလျှော့စျေးထက် ပိုနည်း တဲ့ ကာလတိုအထူးလျှော့စျေးကို ထပ်မံသတ်မှတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Customer Setting မှာ ‘select lowest’ price options ကို ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့် စျေးနှုန်းကို ထပ်လောင်းပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။)
ထူးခြားသော ပြောင်းလဲမှုမဟုတ်ပေမယ့် တစ်ကယ့်ကို အထောက်အကူပြုတဲ့ အပြောင်းအလဲကတော့ ‘Alerts and Approvals’ ကနေ ‘Approved’ လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ Transaction ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး၊ ၄င်း ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Transaction ဟာ ပြင်ဆင်ပြီးချိန်မှာ အလိုအလျောက် ‘Approval’ လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ‘submitted’ ဖြစ်သွားမှာပါ ။
Opening Balance အသစ်တွေ ၊ Journal Entry တွေလို အချက်အလက်တွေကို ‘Import’ လုပ်ရာမှာလဲ ပိုမို လွယ်ကူ ချောမွေ့လာနိုင်ပြီး ထူးခြားချက်အနေနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံရာနေရာမှာ Batch/Serial အစရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုပါ တိုက်ရိုက် Import လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဘယ်လို ထူးခြားမှုတွေ SAP Business One HANA မှာ ထပ်ပြီး တွေ့ လာရ ဦးမလဲ။
SAP Business One HANA ကို အသုံးပြုနေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ SAP ရဲ့ အသစ်ထပ်မံပါ၀င်လာမယ့် Exclusive Improvement တွေကို မျှော်လင့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ SAP HANA Platform ကို အသုံးပြုပြီး ရှုပ်ထွေးတဲ့ သတင်းအချက် အလက်တွေကို နားလည်ရလွယ်ကူတဲ့ Semantic Layer အဖြစ် တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်သလို SAP ရဲ့ နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့ ‘Cockpit Templates’ အသစ်လဲ ပါ၀င်လာဖွယ်ရှိပါတယ်။
အသစ်ပါ၀င်လာမယ့် Analytic Portal Feature အနေနဲ့ အသုံးပြုသူတွေဟာ SAP Business One ကို Login ၀င်စရာ မလိုပဲ Schedule တစ်ခုနဲ့ Reports တွေကို ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော ထူးခြားချက်တွေ အနေနဲ့ကတော့ Sales Order နဲ့ Sales Quotation တွေမှာ Up-sell/Cross-sell recommendation တွေနဲ့ အရေးပါတဲ့ စားသုံးသူအချက်အလက်တွေကို လဲ “Customer 360 Dashboard” ကနေ တစ်ဆင့် သိမြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်အလက်များ ဟာ “SAP SMB Innovation Summits 2017 in MACAO” တွင် ဖော်ပြခဲ့သော အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပြီး SAP အနေဖြင့် အပြောင်းအလဲ များရှိိလာနိုင်ပါတယ် ။
#SAP #ERP #VANGUARDMYANMAR #SAPBusinessOne